दिदीसँग एकअर्काको पोल खोल्दै प्रीतम आचार्यसंगै पहिलोपटक मिडियामा (भिडियो सहित) – Ap Nepal
दिदीसँग एकअर्काको पोल खोल्दै प्रीतम आचार्यसंगै पहिलोपटक मिडियामा (भिडियो सहित)
ईटहरी/ भारतिय चर्चित टेलिभिजन रियालिटी शो ‘सारेगमप लिटिल च्याम्प’ मा गएपछि लोकप्रिय बनेका बाल गायक प्रीतम आचार्य यतिबेला घरमै छन् ।
स्वरका कारण आफुलाई संगै नेपाललाइ समेत विश्वमाझ चिनाउन योगदान दिएका आचार्य उक्त रियालिटी शो बाट फर्केपछि भने सुस्ताए । केही सम्मानका कार्यक्रम र पढाईमा भन्दा उनको ध्यान गएन ।
जिटिभिको सम्झौताको कारण पनि उनी चुप थिए । लकडाउनको समयमा प्रीतम मोटाएका पनि छन् ।
भारतबाट फर्किएपछि एउटा गीत उनको आवाजमा सार्बजनिक भयो । सो गीत नितान्त उनको आवाजमा मात्रै थिएन । तर, अब भने उनले केही गीतहरु सार्बजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् ।
धेरै पछि मिडियामा देखिएका उनले यो कुरा बताएका हुन् । यो लकडाउनको समयमा ३ ओटा भिन्नाभिन्नै स्वादका गीतहरु रेकर्ड भैसकेको उनले बताए । उनी संगै मिडियामा पहिलो पटक प्रीतमको एकमात्र दिदी प्रीया आचार्य पनि देखिएकी छन् ।
पहिलो पटक मिडियामा आउदा खुसी र डर दुबै लागेको उनले बताए । तिहार नजिकिदै गर्दा यसैलाई लक्षित गरेर प्रीतम र उनको दिदिसंग तिहार विशेष कुराकानी गरिएको छ । कुराकानिमा दुबैले एकअर्काको पोल खोले ।
प्रीयाको भने डान्समा रुचि रहेको बताईन् । सानैदेखि डान्समा रुचि राख्ने उनी गीत गाउनमा भने खासै सौखिन नरहेको सुनाईन् । ११ मा पढ्दै गरेकी प्रीयाको इच्छा मोडलिङमा पनि रहेको छ । परिवारको सबैले सपोर्ट गरेका कारण जे केही राम्रा काम गर्न रोकतोक नरहेको उनले कुराकानिका क्रममा भनेकी छन् ।
हेर्नुस् पूरा भिडियो कुराकानी ।
Prevआस्मा र सरोजको अभिनयमा ‘घिन्ता:ङ घिन्ताङ मादलु…’ भन्दै आए योगेश र सारिका (भि,डियो सहित)
Nextगुर्जो सेवन गर्दै हुनुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् (आ;युर्वेद विभागबाट जारी पत्र सहि’त)
यसकारण बिग्र ‘न्छ प रदेशीको घर, बार ….विदेश र हनेले प’ ढ्नै पर्ने कु रा
बढ्यो अमेरीकी डलरको भाउ सहित यी बिदेशी मुद्राको भाऊ हेर्नुहोस् कुन देशको कति पुग्यो ?
६ वर्ष पछि म,रेको मान्छेको चिहा’ न १२ बजे राती खन्नुको कारण बल्ल बुबाले बताʼए -हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) (72492)
लाहुरेकी श्रीमतीले रूदै दिईन यस्तो बयान भन्छिन् “मोवाइल गरगहना सबै बेच्यो, मलाई बच्न लागेको रैछ” (भिडियो सहित) (36572)